February 28, 2009	Warbixin shaaca ka qaaday meeqaamka hirgelida doorashadu gaadhsiin karto Somaliland Nairobi (The Economist/Ogaal)- Maqaal uu shalay daabacay wargeyska The Economist ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa lagu sheegay in ka dib 18-kii sannadood ee la soo dhaafay xaaladihii Soomaaliya ay yartahay fursada Madaxweynaha cusub ee dalkaas iyo Madaxweynaha Maraykanku ay u haystaan inay talaabooyin horumar leh ka gaadhaan.
London (Ogaal)- Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland oo uu weheliyaan hogaanka xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, ayaa shalay lagu soo dhaweeyay aqalka Baarlamaanka dalka Britain.
Hargeysa (Ogaal)-Weftiga Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) iyo Faysal Cali Waraabe, waxa aqalka Barlamaanka England ku soo dhaweeyay haweenayda Xildhibaan Kerry McCarthy iyo Allen Michael oo ka tirsan Baarlamaanka dalkaas, kuwaasoo ka mid ah mudaneyaal British ah oo u ololeeya qadiyadda Somaliland. Ka dib markii si diiran loogu soo dhaweeyay halkaas, waxay weftiga UCID Baarlamaankaas warbixin ka siiyeen xaaladda guud ee Somaliland. Guddoomiyaha Golaha Wakiilladu waxa Baarlamaanka England uga waramay sidii ay u qabsoontay Diiwaangelinta Codbixiyeyaashu, taasoo uu tilmaamay inay si wanaagsan u dhacday. Guddoomiyaha xisbiga UCID, ahna Murashaxa Madaxweynenimada ee xisbigaas Inj. Faysal Cali Waraabe, ayaa Miss Kerry McCarthy iyo Mr Allen Michael uga mahadnaqay sida ay u qaabileen iyo dedaalkooda ay ku garab taaganyihiin qadiyadda Somaliland. Guddoomiyaha UCID waxa uu mudaneyaasha Britain u sheegay kana codsaday in dhaqaalaha dawladdoodu ku caawiso Somaliland si toos ah loo siiyo oo aan cid kale lasoo marin. Wuxuuna warbixin ka siiyay geedi-socodka hawsha doorashada Madaxtooyada, taasoo uu tilmaamay inuu ku kalsoon yahay in si ka wanaagsan sidii kuwii hore ay u dhici doonto. Waxa kale oo uu ka codsaday in dawladda Ingiriisku xooga saarto sidii Caalamka culays loogu saari lahaa, Ictiraaf buuxana loo siin lahaa Somaliland. Intaa ka dib, waxa isna madashaa ka hadlay Guddoomiye Ku-xigeenka koowaad ee xisbiga UCID Aadan Maxamed Mire Waqaf, wuxuuna dawladda Ingiriiska uga mahadnaqay sida ay weftigooda u qaabishay, wuxuuna si gaar ah ugu mahadceliyay Xildhibaanada England ee u ololeeya qaddiyada madaxbanaanida Somaliland. Warbixintaa weftiga uu hogaaminayo Guddoomiyaha Wakiilladu u jeediyay aqalka Baarlamaanka Britain ka dib, waxa hadal kooban halkaa ka jeediyay Xildhibaan Allen Michael oo ahna German and Secretary of all party Parliamentary Group, mahadnaq uu weftiga ugu jeediyay siday warbixinta u siiyeen ka sokow, waxa uu sheegay inay ka warqabaan sidii Diiwaangelintu u dhacday oo uu amaanay. Mr Michael waxa oo uu sheegay inuu rajaynayo in doorashada Madaxtooyada Somaliland si fiican u dhacdo, isla markaana waxa uu ka dhawaajiyay in dhowaan la filayo in Madaxweyne Rayaale socdaal ku tego Ingiriiska. Xildhibaan Allen Michael waxa uu weftiga ugu hambalyeey in Somaliland xubin ka noqotay Midowga Baarlamaanada Caalamiga ah (International parlimentry union), wuxuuna weftiga gudoonsiiyay buugaag ku saabsan horumarka Somaliland ku talaabsatay. Source: Qarannews
Qaar ka mid ah Culimada
Hargeysa oo ka hadlay xiisada Ceel-bardaale
“Xukun aan Cadaalad lagu gelini waa xukun-qarqoosh oo waxba ma daweeyo”
Sheekh Xassan Cabdisalaam
Hargeysa (Ogaal)- Qaar ka mid ah Culimada magaalada Hargeysa, ayaa ka hadlay xiisada ka taagan deegaanka Ceel-berdaale oo u dhexeeya degmooyinka Gabiley iyo Baki.
Culimadan oo shalay galab shir-jaraa’id ku qabtay Hargeysa, waxay baaq nabadeed u jeediyeen dhinacyada xiisadu u dhexayso, waxayna faahfaahin ka bixiyeen qaabka ugu haboon ee ay u arkaan in lagu demin karo colaadaas oo u dhexaysa laba beelood oo halkaas wada dega. Ugu horayn Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo halkaas ka hadlay, waxa uu sheegay in loo baahan yahay in cid waliba doorka ay ku leedahay ka qaadato sidii loo afjari lahaa colaadaas. “Waa Fidno, runtiina Fidnadu aad bay u dhib badan tahay oo waxa la yidhaahdaa Daaman la qabto ayay leedahaye, dabo la qabto ma leh, ka hortageedaana waajib ah.” Sidaa ayuu yidhi Sheekh Dirir. Wuxuuna intaa ku daray, “Dabkaa sida loo bakhtiinayo waa waajib saaran umadda Islaamka, waxayna u baahan tahay saddex arrimood oo ah; in laga dedaalo, daacadnimo jirto, Diin-na lagu daweeyo. Markaa saddexdaa arrimood haddii la helo inshaa Allaah arrintaasi way bogsanaysaa. Cid waliba kaalin bay leedahay, cida masuuliyadu saaran tahay ee xilka haysa maalintaa ayuu waajibka u weyni saaran yahay, waana arrimihii loo igmaday. Sidaa darteed, inay iyagu (dawladdu) hormuud ka noqdaan waa waajib saaran oo Illaahay iyo umadduba kala xisaabtamayaan.” Wuxuuna tilmaamay in loo baahanyahay in dawladdu dhamaynta xiisadaas la kaashato qaybaha kale ee bulshada, sida Salaadiinta, ganacsatada iyo Culimada Diinta.
Sheekh Yuusuf Aadan oo isna halkaa ka hadlay, ayaa ka waramay waxyaabaha Diinta Islaamku ka qabto in qof Islaam ahi dilo mid la mid ah, taasoo uu tilmaamay in Illaahay xaaraantinimeeyay. Isla markaana cidda fulisa iyo ka garab ku siiya intaba inay Naarta ku mutaysanayaan. “Xukuumadda waxaan leeyahay arrintaa deminteeda haw yaraysanina oo masuuliyadeeda qaada. Waa in dadkaa sidii loo kala dhex gali lahaa, loo kala hor joogsan lahaa ee qofka loo taag-waayo loo edbin lahaa in aydaan ka gaabsane laga shaqeeyo. Markaa haddaad ka gaabisaan Ilaahay agtiisa maalinta Yawmal-qiyaamaha waa laydin su’aalayaa, umadduna way idin kula xisaabtamaysaa,” ayuu yidhi Sheekh Yuusuf Aadan-gurey. Wuxuuna odayaasha dhinacyada dagaalamay, goleyaasha qaranka iyo guud ahaan Madaxdhaqameedka Somaliland u soo jeediyay in laga shaqeeyo sidii looga hortegi lahaa, loona soo afjari lahaa colaadaas. Waxa uu sheegay in arrintani aanay u baahnayn keliya in la dejiyo xaaladda colaadeed ee haatan ka soo cusboonaatay, balse loo baahan yahay in guud ahaan la soo afjaro muran-dhuleedka ay salka ku hayso, taasoo uu xusay inay muddo dheer soo taxnayd. “Waxay u baahan tahay in xukun adag oo laysku soo noqonin meeshaa laga gaadho,” ayuu yidhi. Sidoo kale, Sheekh Xassan Cabdisalaan iyo Sheekh Maxamed Cali-gadhle oo iyana halkaas ka hadlay, waxay sheegeen in loo baahan yahay in suulinta dirirta labada dhinac ee ku muransan deegaanka u dhexeeya Gabiley iyo Baki oo dhul beereed u badan, xukunkooda loo raaco Diinta Islaamka. “Xukun aan Cadaalad lagu gelini waa xukun-qarqoosh oo waxba ma daweeyo.” Sidaa ayuu yidhi Sheekh Xassan Cabdisalaan, wuxuuna intaa raaciyay, “Arrintaa dawadeeda haddii la doonayo Diinta Illaahay bay ku jirtaa.” Guud ahaan xubnahan Culimada ahi waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay doorkooda ka qaataan sidii loo dhamayn lahaa xiisada deegaanka Galbeed.
Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Aw-Cabdi, Sheekh Khaliil Cabdillaahi iyo Sheekh Maxamed Macalin Cabdi (Carab) ayaa ka mid ahaa Culimadaa reer Hargeysa ee baaqa nabadeed jeediyay.
Xaaji Cabdi-Waraabe oo talo nabadeed jeediyey
“Muranka (Gabiley iyo Baki) Guurtidu
hore ayay u dhamaysay, waxaase soo celiyey…”
Hargeysa (Ogaal) – Gudoomiyaha guddiga joogtada ah ee Golaha Guurtida Xaaji Cabdi Xuseen (Cabdi Waraabe) ayaa sheegay in Golaha Guurtidu hore go’aamo uga soo saarey muranka deegaan u dhexeeya Baki iyo Gabiley oo todobaadkan mar kale shaqaaqo ka aloosantay. Islamarkaana waxa uu sheegay in arrintaas deminteeda haatan lagu hawllan-yahay.
Hargeysa: Xisbiga UCID oo Xaflad soo dhawayn ah u sameeyay taageerayaal ku biiray
Hargeysa (Ogaal)- Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID ayaa xaflad soo dhawayn ah u sameeyay inka badan kun qof oo ah taageerayaal cusub oo ku biiray.
Xafladan oo lagu qabtay Hotelka Dalxiis ee magaalada Hargeysa, waxaa ka qaybgalay masuuliyiin ka tirsan xisbiga UCID. Mr Sayid Cumar oo ah Guddoomiyaha Dallada SOPYO oo ay ku midoobeen sideed urur oo ka mid ah ururada bulshada ee ka jira degmooyinka caasimada Hargeysa, ayaa ka waramay sababta keenay u digo-rogashadooda xisbiga UCID. Waxaanu sheegay in 1228 qof oo xubno ka ah sideedaa urur ay markii hore ka tirsanaayeen xisbiyada UDUB iyo KULMIYE, balse ay go’aansadeen inay ku biiraan xisbiga UCID. Mr Sayid Cumar waxa uu tilmaamay in SOPYO ururada hoostagaa isugu jiraan ururo Dhalinyaro iyo qaar haween intaba, waxaanu balanqaaday in ururadaas oo ay sida uu xusay xubno ka yihiin inka badan kun, ay hadda laga bilaabo si buuxda ula shaqaynayaan xisbiga UCID. Masuuliyiin ku hadlayay magaca garabada Dhalinyarada iyo Haweenka ee xisbiga UCID, gaar ahaan gobolka Hargeysa oo halkaas ka hadlay, ayaa muujiyay siday ay ugu faraxsan yihiin taageerayaashan ku biiray, waxayna sheegeen inay soo dhawaynayaan. “Waxaan Dhalinyarada iyo Haweenkan u sheegayaa inuu xisbiga UCID ku hawlanyahay ka shaqaynta mustaqbalkiina, waana ku mahadsantiin ku ku soo biirista Xisbiga UCID.” Sidaa waxa yidhi Guddoomiyaha gobolka Hargeysa ee xisbigaas Maxamuud Cali Jiir oo munaaasibadaas ka hadlay. Guddoomiyaha Waqooyiga Ameerika ee xisbiga UCID Keyse Cali Geedi oo isna halkaa hadal kooban ka jeediyay, waxa uu ka waramay barnaamijka siyaasaddeed ee xisbigooda. “Annagu dalka uma aanu iman in aanu ka shaqaysano lacag oo kiishash umaanu soo tolan….Dadka xisbiga UCID aasaasay ama taladeeda hayaa waa dad lacag haysta oo doonayn inay lacag ka shaqaystaan, laakiin waxay doonayaan inay horumariyaan,” ayuu yidhi Keyse Cali Geedi.
Afhayeenka, ahna Kusimaha Guddoomiyaha xisbiga Xassan Xusseen (Codyare) oo gebogebadii munaaasibadaa ka hadlay, ayaa eedayn u jeediyay Xukuumadda Madaxweyne Rayaale. Isla markaana waxa uu Xukuumadda ku eedeeyay inay hagratay wax-ka-qabashada muran-dhuleedka haatan xiisadu ka taagan tahay ee deegaanka Galbeed. “Deegaankaa waxa ka soo jeeda qaar ka mid ah masuuliyiinta Xukuumadda ugu sareeya…Markaa waxaan qabaa lama dhamayn kari waayine, in Xukuumaddu hagratay wax ka qabashada xiisadaas iyo inay soo afjarto murankaas oo muddo dheer soo taxnaa,” ayuu yidhi Afhayeenku. Tahriibayaal Soomaali ah oo ku le’day Saxaaraha Liibiya
Hargeysa (Ogaal/W.Wararka) – In ka badan 25 qof oo Soomaali ah iyo laba Itoobiyaan ah ayaa ku dhintay saxaraha dalka Liibya, kuwaasoo damacsanaa inay dalkaas qaab tahriib ah uga sii gudbaan dalalka Yurub, waxaana sidoo kale ku dhawaacmay shilkaas 80-qof oo qaarkood uu burburay maduxu.
Khasaarahan dadka badan wax-yeeladu ka soo gaadhaya ayaa ka yimi ka dib markii Baabuur kuwa Tahriibka qaada ah oo ay ku socdaalayeen Rakaab ka badan 120 qof oo isugu jira Soomaali Iyo Itoobiyaan uu ka dhacay meel dalow ah. (Jar). Laba ka mid ah dadka ku dhaawacmay oo xaaladoodu u muuqato mid sahlan marka loo eego dadka kale ee ku weheliyay Safarkan Biimaha ah ayaa saxaafada u sheegay in Shilku dhacay maalmihii aynu soo dhaafney, Feb.25 keedii. “Dadka dhintay 25-qof oo ka mid ah waxay ahaayeen dhallinyaro Soomaali ah, halka labada kalena Ethiopia u dhasheen,… dadka dhaawacmayna waxay u badnaayeen Soomaali sidoo kale,… waxayna dadku ka burbureen dhabarka iyo madaxa” ayay yidhaahdeen gabadh iyo wiil Soomaali ah oo dhaawacyo fududi shilkan ka soo gaadhey. Labadan qof waxa ay ku tilmaameen in Dirwalka waday gaadhiga Tahriibinayey uu maandooriye Isticmaaley, Islamarkaana uu ka tuuray Jar dheer. Kaasoo sababay in Baabuurku ku dhawaad Lix jeer is rog-rogo, inta badan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayna ay waxyeeladu ka soo gaadhay foostooyin ay ka buuxeen shidaal iyo biyo sahay ahaan loogu tala-galay.
Booliiska dalka Libya ayaa warku sheegay inay u fidiyeen gargaar dadkaas 12-saacadood ka dib markii uu shilku dhacay, waxayna labadan qof ay xaqiijiyen in dadka qaarkood ay u dhinteen gargaar la’aan; maadaama meeshu tahay saxaro Cidlo ah.
Dhibanayaashan ayaa ka dayrinaya xaalada Cusbitaalka la dhigay, kaasoo u muuqda sida ay sheegeen mid aan qaadi karrin dhaawacyada intaa leeg ee lagu ururiyay, Islamarkaana aaney oolin daawooyin. Tahriibayaashan ayaa damacsanaa inay uga sii gudbaan dalka Liibya dalalka Reer galbeedka, gaar ahaan dalka Talyaaniga, halkaasoo sanadihii ugu dambeeyay-ba noqday jidka Kumanyaal Soomaali ah oo qaab biimo iyo indha adeyg ah u beegsada dalalka reer Yurub.
Midawga Suxufiyiinta Somaliland oo Xukuumada ka codsaday in Xoriyadiisa loo soo celiyo Tifaftiraha Wargeyska Yool Hargeysa (Ogaal)- Midawga Suxufiyiinta Somaliland ayaa Xukuumadda ugu baaqay in xorriyadiisa loo soo celiyo Tifaftiraha Wargeyska Yool Maxamed Cabdi Curad oo doraad Boolisku xabsiga u taxaabeen.
Sida lagu sheegay warsaxaafadeed kooban oo uu xalay soo saaray Guddoomiyaha USJ Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse), waxa uu Xukuumadda ugu baaqay in Suxufiyiinta lagu ixtiraamo mihnadooda. Warsaxaafadeedkaas oo dhamaystirana waxa uu u dhignaa sidan; “Midawga Saxaafada madaxa banaan ee Somaliland USJ waxa uu ugu baaqayaa xukuumada in xoriyadiisa loo soo celiyo Tifaftiraha Wargeyska Yool Maxamed Cabdi Guuleed (Curad), ee ka soo baxa Hargeysa, oo maalintii afraad ku xidhan xarunta CID-da ee Hargeysa, kaas oo aan la sheegin sababta keliftay xadhigiisa.
Mar kale waxa uu midawga saxaafada madaxabanaan ee Somaliland ugu baaqayaa xukuumada in Suxufiiyinta iyo saxaafada lagu ixtiraamo mixnadooda, hadii ay dambi galeena loo maro sida sharciga ah.”